Seedorf: Milan Markale Ayay Is Muujin Doontaa
HomeWararka MaantaSeedorf: Milan Markale Ayay Is Muujin Doontaa
Tabare Garan La Meel Laga Abaaray
Tababaraha kooxda Milan, Clarence Seedorf ayaa ku dejiyey taageerayaasha kooxda in sanadkani Ac Milan u yahay mid guuldaro kadib dhirbaaxadii 4-2 da ahayd ee ay qabad siisay Parma Axadii, wuxuuse ku Hanjabay in Milan awoodeedii iyo ka sii xoog badan la soo noqon doonto xili ciyaareedka dambe ee 2014-15.
Ciyaaryahankan hore ee Hollandiis ka ah ayaa awoodi waayay inuu arimaha isku duba rido tan iyo markii uu tababarenimada kala wareegay Massimiliano Allegri Bishii February , wakhtigaas oo Milan fadhiday kaalinta ay maantaba joogto ee 11 aad. Saddexdii ciyaarood ee ugu dambeeyeyna ay guuldaro haleeshay.
Taageerayaasha daacada u ah kooxda Rossoneri , ayaa mudahraad weyn dhigay Maalintii Axadii , kaas oo ay kaga cabanayeen qaab ciyaareedka liita ee kooxda. Laakiin Seedorf ayaa ugu baaqay inay degenaan muujiyaan , waxaanu u ballan qaaday in uu kooxda markale dib u soo dhisi doono.
“Waxaanu bilaabi doonaa mashruuc cusub xili ciyaareedka dambe, yool ka aanu leenahayna waa inaan Milan dib ugu soo celino hormuudkii ay ahaan jirtay,” ayuu Seedorf ku yidhi warbaahinta.
“Waa inaan dhisnaa koox cusub oo aan Milan ka dhignaa markale mid naadi xoog leh. Waanu isku dayi doonaa inaan hamigaas ku meel marino maskax iyo garasho dheer.
“Waa khasab inaan ciyaaryahanada saxda ah soo iibsano. Waa inaan heshiis la soo galnaa ciyaaryahano fahmi kara qaabka cusub ee kooxda aanu u dhisayno, kuwaas oo doonaya inay qayb ka noqdaan mashruuca cusub.”
Naadiga Milan ayaa 35 dhibcood oo kaliya ka urursaday 28 kii kulan ee ay soo ciyaareen, waxaanay yuururaan meel ka hoosaysa kooxda Juventus oo hogaanka ku haysa 37 dhibcood.
Tottenham Oo Tababare Cusub Loo Dhiibay
Tottenham ayaa xaqiijisay in Mauricio Pochettino ay u caleemo saartay tababaraha cusub ee kooxda.